Wafdigii Soomaaliya oo ku soo laabtay maxkamadda ICJ iyo go’aanka maxkamadda oo la wada sugi – Xeernews24
Wafdigii Soomaaliya oo ku soo laabtay maxkamadda ICJ iyo go’aanka maxkamadda oo la wada sugi
4. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Wafdigii ka socday dowladda Soomaaliya ee gaadhay xarunta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa dib ugu soo duulay Muqdisho, kadib markii ay maxkamadda dhageysatay doodaha Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamadda ayaa kulan deg deg ah ugu yeedhay Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo muran dhanka xuduudda badda ah, kadib markii Kenya ay codsi cusub u dirtay maxkamadda ayada oo dooneysa in dhageysiga kiiska mar kale dib loo dhigo illaa bisha September ee sanadda 2020.
Madaxweyne ku xigeenka maxkamadda Xue Hanqin ayaa dhageysatay doodda Kenya ee dib u dhigista dhageysiga kiiska iyo diidmada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maxkamadda u sheegay in Soomaaliya aysan aqbali karin in xitaa hal maalin dib loo dhigo kiiskan amr kale, ayna doonayaan in waqtigiisa lagu dhageysto.
Khadar ayaa maxkamadda u sheegay in Kenya aysan daacad ka ahayn cudur-daarrada ay la imaneyso mar walba, ayna guud ahaan ku qanacsaneyn in maxkamadda ay dhageysato kiiskan.
Maxkamadda ayaa horey u ogolaatay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, waxaana dhageysiga dacwadda oo markii hore la qorsheeyey 9-ka September dib loo dhigay illaa 4-ta bisha November ee soo socota.
Xue Hanqin ayaa kadib markii ay dhageysatay doodda labada dhinac u sheegtay inay dalalkooda ku laabtaan ayna maalmaha soo socda maxkamadda ku dhowaaqi doonto go’aankeeda ku aaddan iyo dhageysiga kiiska mar kale dib loo dhigo iyo in kale.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/kk-620x330.jpg 330 620 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-04 18:27:232019-10-04 18:27:23Wafdigii Soomaaliya oo ku soo laabtay maxkamadda ICJ iyo go’aanka maxkamadda oo la wada sugi
Guud ahaan Gobolka Sitti waxaa hadheeyey banaan baxo waa wayn oo laga soo horjeedo... Daawo Shaqaaqadi degmada Saylac oo wali sal dhigi la,